Baarlamaanka Britain oo diiday dagaalka Suuriya - BBC News Somali
Baarlamaanka Britain oo diiday dagaalka Suuriya
Image caption Goobaha laga yaabo in la bartilmaameedsado hadii weerar lagu qaado Suuriya
Baarlamaanka Britain ayaa cod bixin ku diiday in Britain ay qey ka noqoto dagaal ka dhan ah Suuriya
Ra'iisalwasaare David Cameroon waxa uu arrinta Suuriya soo hordhigay baarlamaanka dalkan Ingiriiska, si looga doodo talaabooyinka ugu habboon ee laga qaadi karo Suuiya inta ka horraysa cod loo qaado in weerarro milateri la adeegsado in in kale.
Fadhi degdeg ah oo baarlamaanku galabta yeeshay, ayaa ra'iisalwasaaruhu waxa uu ka sheegay in aan weli boqolkiiba-boqol haatan la wada caddayn karin in sun kiimika ah la isticmaalay dagaalladii ugu danbeeyey ee Suuriya laakiin waxa uu sheegay in si kastaba ha ahaatee masuuliyadda ay yeelanayso dawladda Suuriya.
Dalkan Ingririiska waxa sharci ahaan u bannaan in uu qaado weerarro duqayn ah isaga oo aan ka dhursugin ogolaanshaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey, marka ay timaaddo baahi ah in lagag hortegi karo tallaaba noocaas ah, dhibaato weyn oo banii'aadminnimo oo soo socota.
Maraykanka ayaa isna haatan u muuqda in uu ka quustay in uu taageero ka hela Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si uu tallaabo uga qaado Suuriya.
Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in uusan weli go'aan ku gaarin in dalkiisu qaado tallaabo militeri.
Obama ayaa sheegay inay iska caddahay in dowladda madaxweyne Bashar Al Asad ee Suuriya ay dad rayid ah u adeegsatay hubka wax gumaada ee kiimikada.
Ruushka ayaa ku gacansayray qaraar qabyo ahaa oo la hor keenay shanta xubnood ee joogtada ah ee Golaha Ammanka.
Maraykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay macangagnimo.
Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibedda ee Maraykanka Marie Harf ayaa sheegtay in Maraykanka uusan oggolaan doonin in isamri waaga diblumaasiyadeed uu difaac u nqodo dowladda suuirya.
Ruushka iyo Shiinuhu waxay doonayaan in marka hore laga dhursugo kormeerayaasha Qaramada Midoobay ee ku sugan Suuriya oo la filayo inay warbixin ka soo saaraan hubka kiimikada ee Suuriya.
Khariidadda 3: degaannada Dimishiq ee sunta kiimikada lagu werarray
28 Agoosto 2013
Khariidadda 1: qorshaha weerarrada cirka iyo badda